Warbaahinta, Xukunka Dhagax Ku Dilista Iyo Jarista Xubnaha Jidhka – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Warbaahinta, Xukunka Dhagax Ku Dilista Iyo Jarista Xubnaha Jidhka
Masuul ka tirsan ururka Daalibaan ayaa caddeeyey in ay qasriga madaxtooyada Afqaanistaan kaga dhawaaqi doonaan Imaarad Islaamiya, kaas oo ah magacii ay Daalibaan 20 sano ka hor u bixisay dalkaas oo ahaa “Imaarada Islaamiga ah ee Afqaanistaan.
”Dhinaca kalana ururku waxa uu fidiyey cafis guud, shaqaalaha dawladda waxa uu ka codsaday in ay sidii caadiga ahayd shaqada u wadaan, safaaradaha shisheeyahana waxa uu ku wargeliyey in ammaankooda la sugayo.
Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa baahisay war sheegaya in afhayeen ku hadlay magaca Daalibaan uu sheegay in siyaasadda Daalibaan ay ku dhisantahay, in laga tago ciqaabta dilka ah, dhagax ku dilka iyo xubno goynta, iyo in warbaahinta loo ogolaan doonon xorriyad ay ku naqdiyaan cidda ay doonaan, haddii aanay shakhsi weerar samaynayn.
Waxa kale oo uu afhayeenkani xaqiijiyey in dumarka Afqaanistaan loo ogolaan doono in ay kelidood guryahooda ka bixi karaan iyaga oo aan lagu qasbayn muxram, in xuquuqda Haweenka la dhowri doono, iyo in loo ogolaan doono waxbarashada iyo shaqadaba, iyada oo keliya laga rabo in ay xijaab xidhaan.
Haddii siyaasadahan ay Daalibaan dhaqangeliso waxa uu macnaheedu noqonayaa in ay si buuxda u beddeshay aragtiyihii hore ee ay dalkaas ku dhaqaysay 20 sano ka hor, intii aanay Maraykanka iyo xulafadiisu xukunka ka tuurin.
Previous articleHUBKA CASRIGA AH EE AY DALIBAAN HESHAY, ARAGTIDOODA XUQUUQDA AADANAHA IYO TRUMP OO KU BAAQAY IN BIDEN UU IS CASILO=====
Next articleWaa maxay sababta uu Maraykan uga baxay Afghanistan? W.Q: Cabdirisaaq Rakuub